လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်…:D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » လျှပ်တပြတ် ရိုက်ချက်…:D
Posted by we R one on Jul 27, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 20 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်နေ့ က ခရမ်းမြို့ချောင်းတလျောက်ရိုက်ထားတာ။ ရှုစားကြည့်ကြ ပါကုန်..:D
တို့များ တော ရွာမှာ ကွယ်.. (ပုံ-၁)
တို့များ တော ရွာမှာ ကွယ်.. (ပုံ-၂)
တို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၃)
တို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၄)
တို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၅)
ှတို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၆)
ှတို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၇)
ှတို့များ တော ရွာမှာကွယ်.. (ပုံ-၈)
မိမိရရ ရိုက်ထားတယ် ဟဲဟဲ
နောက်အခါ ချောင်း​ရေ သောက်တော့ဘူး …
ဘဲဥမတို့ကတော့ အဲ့ရေမျိုး သိပ်ကြိုက် ဆိုပဲ ..
အမငှီးးးးးးးးးးးးးး ဘာလဲလို့ သေချာကြည့်မိပါတယ် …
တော်လိုက်တဲ့ ရိုက်ချက် အမိအရပဲ ….
အမလေး ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကို မြင်နေမိတယ် …… ကောင်လေးကြီးလာလို့ ဒီပုံမြင်ရင် ရှက်နေတော့မှာပဲ…….
အမလေးဗျ ထွက်တုန်း တန်းလန်းကြီးဗျ—
ဗုဒ္ဓေါ။ အသာလုပ်ပါ ၀ရုန်းရယ်
Well, as we are adults should be aware on the right ofachild. Sometime our manners likely to insultachild’s right without any intention. These pixs can be said violating the CRC
part. 1, article no. 16 describe as follow;
Myanmar Government has signed the agreement on CRC with UN in 1991 already andamember of CRC.
ဒါပေသိ ဧရာဝတီမြစ်ရေကသာ သောက်ကောင်းလို့ တကူးတကကို ခပ်ပြီးကိုသောက်ခဲ့ရပါတယ်။
အနယ်စစ်ဖို့ကျောက်ချဉ်ထည့် ကြိုသောက် သိပ်ကောင်း၊ခုသောက်ရေသန့်က အာပလာပါဗျာ။
ဘာပဲပြောပြော မြန်မာ့မြေ၊မြန်မာ့ရေက အကောင်းဆုံးပါ။
အသန့်ရှင်းဆုံး၊သဘာဝအကျဆုံးသော မြန်မာ့ရေကိုလွမ်းနေတဲ့ မိုးတိမ်………….
အဲ့ လူကြီးဗျာ မကောင်းဝူး
တားကို နောက်ကျောကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်သေး၊ အိန်တာနက်ပေါ်လည်း တင်သေး
ကျောပေးပြီး အပီညှစ်နေတော့ ကျနော်လည်း သိလိုက်ဘူး
သတိထားမိတဲ့ အချိန်ကျတော့ အောက်မှာ တန်းလန်းထွက်ကျနေဘီ
ထပြေးရင်လည်း ခြေထောက်တွေ ပေကုန်မှာ စိုးရသေးလို့ အမြန်ညှစ်လိုက်ရတာ
တော်သေးတယ် တား မျက်နာ ပေါ်မသွားလို့
နောက်တခါ ချောင်းရိုးထဲလာကြည့် အီအီးထုပ်နဲ့ကို ထုမယ်.. ဘာမှတ်လဲ.. ဟွန်း..
ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကိစ္စ ကို ပြောလို့ရတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဓတ်ပုံရိုက်သူရဲ့  တင်ပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပတ်ဝန်ကျင် ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိမရှိတာကို ပြလိုတာလို့ ကျွန်တော် နားလည်မိပါတယ်။ မြစ်ဘေး ချောင်းဘေးမှာ အညစ်အကြေး စွန့်ကြတာ။ ရှိသမျှအမှိုက်တွေကို မြစ်ချောင်းတွေထဲကိုပဲ အလွယ်တကူ ပစ်နေကြတာ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ အချို့  စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေထဲကို စွန့်ပစ်နေကြတာတွေက အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ။ ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးတစ်လျောက်မှာလည်း ဒါတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အသိပညာပေးတာတွေ လုပ်တာအင်မတန်အားနည်းပါသေးတယ် ။ မြစ်တွင်းသွားတဲ့ ခရီးသည်တင် သင်္ဘောတွေ လှေတွေပေါ်ကနေ အမှိုက်တွေကို အလွယ်တကူ ပစ်နေတာကလည်း အများပါပဲ။
မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ … ဒီနေရာမှာဓါတ်ပုံဆရာရဲ့စေတနာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်၊
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအသိမရှိတာတွေကို အခြားပုံစံနဲ့တင်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ…မြစ်ချောင်းဘေးမှာတိုက်ရိုက်စွန့်ရတဲ့အိမ်သာပုံ၊တကယ်လို့များကလေးမစင်စွန့် နေတာကိုပြချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ဒီလိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထက်တစ်ခြားပုံစံနဲ့တင်ပြရင်လဲရပါတယ်၊ (ဓါတ်ပုံကမြစ်ထဲကနေဘဲ လျှပ်တစ်ပြက် ရိုက်ရ တယ် ဆိုရင်တောင်မှ photoshop နဲ့ပြုပြင်ပြီးမှ public ကိုတင်ပြတာ ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်)
တကယ်လို့များဒီကလေးက အနာဂါတ်မှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ သမတ၊၀န်ကြီး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စတဲ့ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဓါတ်ပုံဟာ သူ့ပုံပါလို့သိရရင်ဘယ်လိုနေမလဲ၊ပြည်သူတွေကကောသူ့ကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ၊အဲဒါက record ဖြစ်သွားပြီလေ၊သူတို့ခမျာတောရွာမှာနေရလို့ဒါတွေကိုနားလည်ချင်မှနားလည်ပါလိမ့်မယ်၊ အခွင့်အရေးဆိုတာနားလည်ဘို့နေနေသာသာ၊ရရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့က ပညာတတ်လူတန်းစားတွေပါ၊နားလည်တဲ့သူတွေကပိုပြီးစာနာဖေးမပြီး
အင်း.. အကောင်းဘက်က လှည့်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း…..ဗိုက်ဆာနေတဲ့ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေနဲ့.. ရေထဲက စားတတ်တဲ့ ငါး အတော်များများ အတွက် အဟာရစွန့်ပေးတာ ကုသိုလ်ရပါတယ်လေ…
အညာဘက် ကူမဲကို သွားလယ်တုံးကတော့ အဲဒီမှာ အိမ်သာရယ်ဒီမိတ်ကလေးတွေ တွေ့ခဲ့တယ်..
တကယ့်ကို အိမ်သာအလုံးလက်လုပ်ပြီးသား ရယ်ဒီမိတ်ကလေးတွေ ကြည့်ရတာ အန်ဂျီအိုတွေက လိုက်ဝေဖို့ ထင်ပါတယ်….